Tsingerin-taona faha-45 namonoana ny Kolonely Richard RATSIMANDRAVA: Tonga nanome voninahitra izany ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO. – Sénat de Madagascar
Tsingerin-taona faha-45 namonoana ny Kolonely Richard RATSIMANDRAVA: Tonga nanome voninahitra izany ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO.
February 14, 2020 RAMBELO Abel NIRINA
11 febroary 1975-11 febroary 2020, feno 45 taona katroka androany ny namonoana tetsy Ambohijatovo ny Kolonely RATSIMANDRAVA Richard Filoham-panjakana sady lehiben’ny Governemanta tamin’izany fotoana izany sy ireo manam-boninahitra lefitra niaraka taminy. Olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila no tonga nanome voninahitra ny taom-pahatsiarovana androany talata 11 febroary 2020 tetsy Ambohijatovo, izay nahitana ny Praiministra Lehiben’ny Governemanta NTSAY Christian, ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana RAKOTOARISOA Jean Eric.
Nosokafana tamin’ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ny lanonana, narahina fifandimbiasan-kabary izay nandraisan’ny Praiminisitra fitenenana, nanambarany fa isan’ny nanamarika ny tantaran’i Madagasikara ny famonoana ity Filoham-panjakana ity, ary tsy maty ao am-pon’ny malagasy izany noho ireo vina tsara izay noheverina fa hampandrosoana an’i Madagasikara dia ny fanomezan- danja ny rafitra ifotony izay toa lasa nofinofy ihany anefa taty aoriana.
Taorian’izany dia niroso tamin’ny fametrahana fehezam-bonikazo teo amin’ny toeram-pahatsiarovana niaraka tamin’ireo fianakavian’ny Kolonely Richard RATSIMANDRAVA ny fotoana. Nisy ihany koa fanolorana mari-boninahitra ny fianakavian’ireo miaramila lavo an’ady sy teo amperin’asa nandritra ny taona 2019.
« Rina ANDRIAMANDAVY: Vahinin’ny Fahitalavitra Real TV, nandritra ny Fandaharana L’Invité du Jour ny 06 febroary2020.
INTERVIEW de Rivo RAKOTOVAO, Président du Sénat »